BisheshPati | Trusted Online News Protal in Nepal लडेर विकास गर्ने माओवादी, जस लिने एमाले : पूर्व मुख्य सचिव पौड्याल - BisheshPati
लडेर विकास गर्ने माओवादी, जस लिने एमाले : पूर्व मुख्य सचिव पौड्याल
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागि परेका छन् । उनी आफ्नो जन्मस्थान गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका ५ बम्घास्थित माओवादी केन्द्रको वडा भेला तथा वाईसियल नेपालको समेत वडा भेलामा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै पूर्व मुख्य सचिव पौडेल खुलेरै माओवादी केन्द्रको राजनैतिक यात्रा थालनी गरेका छन् । नेकपा एमाले नेता प्रदिपकुमार ज्ञवालीको निर्वाचन क्षेत्र र जन्मथलोसमेत रहेको त्यस भेगमा माओवादीले लडेर विकास निर्माण ल्याएको बताएका छन् । तर, जस भने एमालेले लिँदै आएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘सब भन्दा बढी कुप्रचार यहि बम्घामा भएको छ । हामी माओवादी लडेर, राज्यसत्तासँग पंखेजोडी खेलेर साधन श्रोत ल्याएर यहाँको विकास निर्माणमा काम गर्ने, अनि उहीँ क्या ? काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्या जस्तो, सोशल मिडियामा चोर डाकाहरु भनेर लेख्ने ।’
विकास ल्याउने माओवादी भए पनि एमालेलाई जनताले विश्वास गरेको र प्रतिवादमा उत्रन नसकेको पनि उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार यस विषयमा जनताले दुई कारण प्रतिवादन गर्न सकेका छैनन् । कार्यक्रममा उनले भने, ‘अनि तपाईहरुले फेरि त्यहीँ पत्याउने, तपाईहरु प्रतिवाद गर्न नसक्ने । दुई वटा कारणले तपाईहरुले प्रतिवाद गर्न नसकेको हो । पहिलो तपाईहरुलाई प्रशिक्षण थिएन, रुपान्तरणको एजेण्डा बोक्ने मान्छे को हो भन्ने थाह थिएन । तपाईहरु संगठित हुनु भएको थिएन । उनीहरु संगिठत ढंगले प्रतिवाद गर्थे । तपाई एक्ला–एक्लै हुनुहुन्थ्यो । अब तपाईहरुको काम हो त्यस्ता कुरा आउनेवित्तिकै तुरुन्त पार्टी कमिटी बस्ने, सत्य पत्ता लगाउने, बिश्लेषण गर्ने, सूचना सहि लिने, लिए पछि सूचनालाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्ने । ’
उनले अहिलेको ब्यवस्था ल्याउने र रुपान्तरणको एजेण्डा बोक्ने पनि माओवादी पार्टी नै भएको ठोकुवा गरेका छन् । उनले कार्यकर्ताहरुसँग प्रतिप्रश्न गर्दै थपे, ‘यो ब्यवस्था कसले ल्यायो ? यो ब्यवस्थाको वाकलत गर्ने को ? यो स्थापित गर्ने को ? समाज रुपान्तरण भनेको त त्यो हो नि ।’ उनका अनुसार हिजो समाजमा जुन किशिमको सामाजिक हिसाबले पछाडी परेको वर्ग समुदाय थियो, जाती थियो । त्यसलाई राज्य सत्ताको मुख्य केन्द्रमा लैजान, त्यसलाई अवसरहरु दिलाउनका लागि लड्ने शक्ति माओवादी केन्द्र नै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘लड्यो र लडेरै स्थापित गर्यो । संविधानमा, कानुनमा, राज्य प्रणालीमा, ब्यवस्थामा , त्यसकारण त तपाईहरु प्रतिनिधि भइरहनुभएको छ । हिजो त त्यस्तो थिएन । अधिकारको रुपमा थिएन । भलै कोही नियुक्त भएका थिए भन्लान नि ।’
नेकपा एमाले र माओवादी एउटै नभएको पनि उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईलाई लाग्ला सबै उस्तै उस्तै हुन् । एमाले र माओवादी भन्या उस्तै उस्तै हुन् यता गए पनि हुन्छ उता गए पनि हुन्छ । तर, होइन । आधारभूत रुपमा फरक छ । आधारभूत रुपमा एजेण्डा बोक्ने विषयमा फरक छ । राज्य प्राणीलको वकालतको विषयमा फरक छ ।’ वडाका अध्यक्ष तारा रानाको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय माओवादी केन्दको वडा कमिटी र दुर्गा पुरिको अध्यक्षतामा वाईसियलको २९ सदस्य वडा कमिटीलाई पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालले प्रमुख अतिथीको हैसियलले सपथ खुवाएका थिए ।